မဒေါင်းလုပ် Farming Simulator 22 မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Farming Simulator 22,
အကောင်းဆုံးလယ်ယာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်း Farming Simulator သည်၎င်း၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဂရပ်ဖစ်၊ ကစားနည်း၊ အကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းပုံစံများပါ ၀ င်သည်။ GIANTS Software မှတီထွင်ခဲ့သော #1 လယ်ယာကစားနည်း Farming Simulator 22 သည်ရာသီအလိုက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများနှင့်အတူယခုအခါစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်သစ်တောကိုအဓိကထားသောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ယနေ့တောင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးအမေရိကနှင့်ဥရောပရှိမတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်သုံးခုတွင်သင်၏လယ်ယာကိုတည်ဆောက်ရန်ဖန်တီးမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုသုံးပါ။
Farming Simulator 22 ကို download လုပ်ပါ
ကွဲပြားခြားနားသောအမေရိကန်နှင့်ဥရောပပတ်ဝန်းကျင်သုံးခုတွင်ခေတ်သစ်လယ်သမားတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္ကိုယူပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာရာသီစက်ဝန်းများနှင့်အတူယခုအခါစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်သစ်တောတို့ကိုအဓိကထားသောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်မျိုးစုံကိုရယူပါ။ John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra ကဲ့သို့စက်အလုံး ၁၀၀ ကျော်မှစက် ၄၀၀ ကျော်နှင့်ကိရိယာများအပါအ ၀ င်။ သစ်စက်အမျိုးအစားများ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်စက်ပြင်များသည်ကစားပွဲအတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းပေးသည်။ multiplayer mode မှာမင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မင်းရဲ့လယ်ယာမြေကိုစီမံပြီးအသိုင်းအဝိုင်းကဖန်တီးထားတဲ့အခမဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေအများကြီးနဲ့မင်းရဲ့လယ်ယာကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပါ။
Farming Simulator 22 သည်ကစားသမားများအားယခင်ကထက်ပိုမိုလွတ်လပ်စေသည်။ ယခုစိုက်ပျိုးခြင်းကို စတင်၍ ကောင်းသောအချိန်များကိုခံစားပါ။
Farming Simulator 22 စနစ်လိုအပ်ချက်များ
Farming Simulator 22 ကစားရန်သင့်ကွန်ပျူတာရှိရန်လိုအပ်သော hardware ကို Farming Simulator 22 PC system requirements အောက်တွင်ပေးထားသည်။ (ဤအရာသည်ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူ GIANTS Software မှမျှဝေထားသောအနိမ့်ဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ )
ပရိုဆက်ဆာ: Intel Core i5-3330 သို့မဟုတ် AMD FX-8320 သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သော
ဗွီဒီယိုကဒ်: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သော (အနည်းဆုံး 2GB VRAM, DirectX 11/12 အထောက်အပံ့)
သိုလှောင်မှု၊ နေရာလွတ် ၃၅ GB
Farming Simulator 22 မသတ်မှတ်ချက်များ
တီထွင်သူ: ‪‪GIANTS Software‬
RimWorld သည်ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သော AI အခြေပြုဇာတ်ကြောင်းပြောသူမှမောင်းနှင်သောသိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။...
Autobahn Police Simulator2သည်ကစားသူများအားရဲအရာရှိတစ် ဦး...
Police Simulator: ကင်းလှည့်အရာရှိများသည်မင်းစိတ်ကူးယဉ်အမေရိကန်မြို့၏ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍...
Firefighting Simulator သည် PC တွင်သင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံး firefighting simulation...
Pure Farming 2018 သည် Techland ၏ simulation game အသစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Dying Light...
Beast Battle Simulator ကိုရူပဗေဒအခြေခံ monster battle game တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Beast Battle...
PC Building Simulator သည်ကွန်ပျူတာစုဆောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍...
Microsoft ၏ flight simulator...
Fly Simulator သည်သင်အားအခြားကစားသမားများနှင့်အွန်လိုင်းတွင်တစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊...
Car Mechanic Simulator 2018 သည်နာမည်ကျော် simulation game series များတွင်နောက်ဆုံး link ဖြစ်သည်။ ...
ကြွက် Simulator ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကစားနည်းပါ ၀...
Euro Truck Simulator2- ပင်လယ်နက်သို့သွားသောလမ်း၊ တူရကီမြေပုံနှင့် ETS2Official DLC သင် Euro...
Farm Manager 2021: Prologue သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခမဲ့ download...
Microsoft Flight Simulator သည် PC တွင်သင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးပျံသန်းနိုင်သော Simulator...
Truck Driver သည် PC တွင်ကစားနိုင်သောအရည်အသွေးကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များနှင့်တူရကီထရပ်ကား Simulator...
Euro Truck Simulator2သည်ထရပ်ကားတစ်မျိုး၏ Simulator...
မင်းရဲ့အိပ်မက်ကအာကာသယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာမင်းကစားလို့ရတဲ့ simulation game တစ်ခုပဲ။ ...
Internet Cafe Simulator သည် internet cafe simulation game အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။...
FarmVille2သည်သင်၏ Windows 8...
Bus Simulator 21 သည် Windows PC နှင့်စက်များပေါ်တွင်ကစားနိုင်သောဘတ်စ်ကားမောင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။...
Farming Simulator 14 သည်လယ်ယာကစားခြင်းကစားနည်းများတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပြီး Windows platform နှင့်...
Prison Simulator: Prologue သည်အကျဉ်းထောင်အစောင့်၏အခန်းကဏ္ကိုသင်ထမ်းဆောင်သည့် simulation game...
Google Game Builder သည်ဂိမ်းဖန်တီးခြင်းနှင့် 3D...